बाइनरी विकल्प रणनीति – के सबै भन्दा राम्रो हो?
लगानी मा बाइनरी विकल्प छैन भनेर अन्य रूपमा, रसीद को उपयुक्त रणनीति र पूर्वानुमान वृद्धि वा गिरावट को मूल्य को छान्नुभएको सम्पत्ति एकै समयमा दिइरहेको एक विशिष्ट समय अन्तराल छ । समय भन्दा, मान्छे को थुप्रैले गर्ने निर्णय गरेका छन् एक प्रकार को अतिरिक्त आय । दुर्भाग्यवश, तिनीहरूलाई अधिकांश छैन यस्तो ठूलो राशि को समय निर्धारण गर्न सक्षम हुन आफ्नो काम अनुसूची. यो अन्त गर्न, वित्तीय विश्लेषकहरूले एक नम्बर सिर्जना विश्वसनीय रणनीति प्रयोग गर्न सकिन्छ कि हरेक व्यापारी, र जो ल्याउन अधिक लाभ छ ।
त्यहाँ विभिन्न समूह बाइनरी विकल्प रणनीति छ । मुख्य व्यक्तिहरूलाई छन्:
1. यो रणनीति को “मूल्य” को कार्य छ “नाङ्गो व्यापार”- व्यापार नाङ्गो
यो सबैभन्दा प्रभावकारी र सरल रणनीति लागि बाइनरी विकल्प । देख्नासाथ मात्र माध्यम अवलोकन को एक मेट्रिक – लागत को एक विशेष सम्पत्ति हो । बस लागू तालिका świeczkowy ज्ञान हासिल गर्न को इतिहास बारे मूल्य जन्माउने साधन । आवेदन लागि यो विधि को आवश्यकता भर गर्न आवश्यक छ अंतर्ज्ञान छ ।
2. यो रणनीति को ट्रयाकिङ संग खेल को प्रवृत्ति
रणनीति खेल संग प्रवृत्ति, i. e. को रणनीति ट्रयाकिङ भन्ने सुझाव को लडी पहिलेका आन्दोलन भन्दा ठूलो छ, यसको परिवर्तन वा रद्द. यो विधि हुन्छन् सबै लेनदेन अनुसार, लामो-अवधि प्रवृत्ति छ । प्रयोग को प्रवृत्ति निर्धारण गर्न मदत गर्छ जो मा निर्देशन पालन गर्न वर्तमान बजार (बढ्दो वा गिरने).
3. रणनीति खेल को प्रवृत्ति विरुद्ध
विधि को विकल्प व्यापार विरुद्ध प्रवृत्ति विपरीत रणनीति को पहिले उल्लेख र कटिबद्ध छ कि एक प्रवृत्ति उलट अधिक लाभदायक छ भन्दा यसको sequel छ । दुर्भाग्यवश, यो विधि आवश्यकता बढी सक्रिय सहभागिता किनभने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ. यहाँ wypatrzenie विशिष्ट अंक मा चार्ट (तिनीहरूले देखाउन सक्छौं यो परिवर्तन को दिशा को मूल्य वा प्रतिबिम्ब).
4. रणनीति “को रोकन सल्लाह दिछन”
को विधि “रोकन सल्लाह दिछन”, अन्यथा यो रूपमा ज्ञात सुरक्षा रणनीति मा केंद्रित मा महत्वपूर्ण कमी को जोखिम मा उतार चढाव को सम्पत्ति मा प्रश्न छ । बिक्रेता को खरीद संलग्न दुई विकल्प: कल र राख्न एक क्रम मा, छ, त्यसैले यो विरुद्ध सुरक्षा उच्च हानि । यदि यो छ, “आरक्षित” विकल्प विपरीत छ, यो खतरा को प्रतिकूल लगानी disappears ।
एक छुट्टै रणनीति लागि बाइनरी विकल्प – के प्रयोग गर्ने?
हामी वर्तमान दुई भन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी रणनीतिहरु प्रयोग गरेर novice प्रयोगकर्ता साथै विशेषज्ञहरु को क्षेत्र मा व्यापार बाइनरी विकल्पछ ।
रणनीति “RSI HIGH-LOW”:
छ को एक सरल तरिका छ, जबकि, उच्च दक्षता देखाइरहेका छन् । यसको नाम implies रूपमा, यो रणनीति प्रयोग लोकप्रिय RSI (नातेदार Strenght सूचकांक). यसको कार्य गर्न चेतावनी मा राशि, समय र नातेदार बल छ । सबैभन्दा अक्सर छान्नुभएको मूल्य 14 समय, सूचक हो ।
भने को मूल्य, यो प्राविधिक सूचक RSI भन्दा उच्च छ एक निश्चित सीमा छ, र त्यसपछि एक तेज गति मा हुनेछ तुरुन्तै फिर्ता आउन तपाईं खरीद गर्न आवश्यक हुनेछ कल. यदि सूचक मूल्य छ techniczego राखिनेछ तल एक निश्चित स्तर, र त्यसपछि एक तेज गति मा फिर्ता आउँदै, तपाईं खरीद गर्न आवश्यक एक PUT विकल्प छ ।
रणनीति “60 सेकेन्ड”, छ कि रणनीति 60 सेकेन्ड:
60 सेकेन्ड रणनीति को एक छ. यो अधिक उन्नत पैसा बनाउने तरिकाहरू मा बाइनरी विकल्प, किनभने यसको प्रयोग आवश्यकता, एक धेरै राम्रो ज्ञान को हालको बजार, र पनि छिटो प्रतिक्रिया समय. पेशेवरों यो रणनीति संग अक्सर, एक मिनेट भित्र हासिल गर्न सक्छन्, एक उच्च मुनाफा मूल्य छ । खेल यो विधि प्रयोग गरेर, यो पर्याप्त छ गर्न प्रयोग मात्र एक सूचक, तर, महत्वपूर्ण यस विषयमा क्षमता, आर्थिक र वित्तीय ।
बाइनरी विकल्प – कसरी परीक्षण गर्न एक रणनीति छ?
हाल इन्टरनेट आउँछ अधिक र अधिक प्लेटफार्म (दलाल), बाइनरी विकल्प र एक शुरुवात रूपमा तपाईं संग एक समस्या छ मेरो दलाल । Therefore, we strongly recommend that you राम्ररी जाँच हाम्रो दर्जा को बाइनरी विकल्प दलाल, सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा विश्वसनीय दलाली प्लेटफार्म मा कि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता प्रदान गर्न beginners प्रयोग गर्न मुक्त डेमो खाता. मा प्रोफाइल परीक्षण फिट भर्चुअल मुद्रा कि प्रत्येक प्रयोगकर्ता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अन्वेषण गर्न लगानी र परीक्षण रणनीति छ । उद्देश्य को यस्तो खाता मा सहायता गर्न को अध्ययन व्यापार र लगानी मा बाइनरी विकल्प । हाम्रो दलाल दर्जा पाउन सक्नुहुन्छ अत्यावश्यक बारेमा जानकारी प्लेटफार्म, र प्रयोग गर्न एक मुक्त खातामा, अनुमति हुनेछ जो तपाईं गर्न मा सार्न सही रणनीति छ मा, अनुकूल गर्न, व्यक्तिगत प्राथमिकता. Assuming that मा एक डेमो खाता तपाईं परीक्षण गर्न सक्छन् सबैभन्दा लोकप्रिय प्रविधी र रणनीति र त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा व्यापार मा एक वास्तविक खाता संग वास्तविक धन छ ।